Qatar Airways: Mid ka mid ah sannadihii ugu adkaa taariikhda duulista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways: Mid ka mid ah sannadihii ugu adkaa taariikhda duulista
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
20 min akhris
Dhamaadka sanad aan caadi aheyn oo ka mid ah caqabadaha ugu badan taariikhda duulista, Qatar Airways waxay ka tarjumaysaa guulaheeda iyadoo la tixraacayo Cudurka faafa ee COVID-19.
Madaxa Shirkadda Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Sannadkan wuxuu ahaa mid aan ka duwanayn kuwa kale, iyadoo cudurrada faafa ee COVID-19 ay saameeyeen dadka iyo ganacsiyada adduunka oo dhan. Duulista ayaa ka mid ahayd wershadaha ugu saameynta badan, iyada oo caqabado gaar ah ay ka dhasheen jawiga safarka oo aad u xaddidan iyo dalab hoos u dhacay.
“Si kastaba ha noqotee, Qatar Airways weligeen kama aanan fogaan tartan, aad baana ugu hanweynahay jawaabtayada. Marka hore, waligeen kamaanu joojin duulimaadka inta lagu jiro aafada, annagoo fulinayna himiladeenna oo ah in rakaabkii ku go'doonsanaa aan ku qaadno guryaheenna duulimaadyadii jadwalka ku jiray iyo kuwii la soo kireystayba. Waxaan awoodnay inaan tan ku guuleysano mahadcelinteena diyaaradeena kaladuwan ee diyaaradaha casriga ah, kuwa shidaalka ku shaqeeya oo noo ogolaada inaan si dhaqso leh uga jawaabno isbeddelada suuqa, iyo sidoo kale dadaalka cajiibka ah ee shaqaalaheena.
Maraakiibteenu waxay kaloo noo ogolaadeen inaan dib uga dhisno shabakadeena meeshii ugu hooseysay bishii May, markii aan u adeegnay 33 meelood, in ka badan 110 meelood maanta iyo 129 dhammaadka Maarso 2021. Waxaan xitaa bilownay toddobo meelood oo cusub inta lagu jiro aafada si aan ula kulanno dalbadaan si rakaabku ula safraan diyaarad ay ku tiirsanaan karaan.
“Waxaan ku hogaaminey warshadaha hirgalinta talaabooyin cusub oo adag oo amaanka ah si loo hubiyo in rakaabku ay nabad qabaan markay nala safrayaan markabka iyo dhulka. Laakiin si ka duwan qaar ka mid ah tartamayaashayada, waxaan sii wadnay maalgashiga khibradda rakaabka ee diyaaradda iyo garoonka Caalamiga ah ee Hamad.
“Markaan horay u fiirineyno, waxaan fileynaa in safarada caalamiga ah iyo dalxiiska ay sii wadi doonaan inay si tartiib tartiib ah u soo kabtaan Horumarka lagu soo bandhigayo tallaalka adduunka oo dhan wuxuu umuuqdaa rajo, wuxuu na siinayaa kalsooni weyn gaar ahaan markaan fiirineyno qeybta labaad ee 2021. Shaqooyin badan ayaa laga qabtay warshadaha soo dhoweynta ee Qatar si loo hubiyo in booqdayaashu ay ku raaxeysan karaan booqasho ammaan ah marka xuduudihiisa ay furan yihiin iyo Waxaan aaminsanahay in dadka safarka ah ay aad u jeclaan doonaan inay arkaan waxa aan bixinayno, gaar ahaan xiisaha Qadar ayaa sii kordheysa ka hor Koobka Adduunka ee FIFA 2022. ”
Qatar Airways guulaha muhiimka ah ee ay gaartay 2020 waxaa kamid ah.
In dadka la geeyo guryaha
Intii lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19, shirkada xamuulka qaada ee Qatar waxay diirada saartay hadafkeeda aasaasiga ah ee ah inay dadka dib ugu celiso dalkeeda. Shabakada duulimaadyadu waligeed kama hoos dhicin 33 meelood meel waxayna sii waday duulimaadkeeda magaalooyinka muhiimka ah oo ay ka mid yihiin Amsterdam, Dallas-Fort Worth, London, Montréal, São Paulo, Singapore, Sydney iyo Tokyo. Natiijo ahaan, sida laga soo xigtay Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) Qatar Airways waxay noqotay shirkadda caalamiga ah ee ugu weyn inta u dhexeysa Abriil iyo Luulyo, taasoo ka dhigan 17.8% ee rakaabka caalamiga ah ee socdaalka bishii Abriil.
Intii lagu gudajiray aafada, shirkadu waxay gurigeeda lawareegtay in kabadan 3.1 milyan oo rakaab ah waxayna si dhaw ulashaqeysay dowladaha iyo shirkadaha aduunka oo dhan si ay ushaqeeyaan in kabadan 470 heshiisyo iyo duulimaadyo dheeri ah. Dadaalo ay sameysay diyaarada ayaa waxay nolol u fidiyeen kuwa ka shaqeeya warshadaha qaarkood sida kuwa badda ku xamaasha, iyadoo diyaarada ay dib u celisay in ka badan 150,000.
Shaqadii dib u celinta Qadar Airways waxay aragtay in diyaaradu u duushay meelo aysan horey uga mid aheyn shabakadeeda, oo ay ku jiraan Antananarivo, Bogotá, Bridgetown, Havana, Juba, Laâyoune, Lomé, Maun, Ougadougou, Port-of-Spain, iyo Port Moresby.
Maraakiib la qabsan karo oo casri ah
Qatar Airways waxay awood u yeelatay inay sii wado duulimaadkeeda inta lagu jiro aafada iyada oo ay ugu wacan tahay raxankeeda kala duwan ee diyaarado casri ah, oo shidaal hufan u oggolaaday inay u fidiso rakaabka iyo xamuulka saxda ah ee suuq kasta maadaama howlaheeda aysan ku xirneyn nooc diyaaradeed oo gaar ah. Taa baddalkeeda, maraakiibta duulimaadyada ee 52 Airbus A350 iyo 30 Boeing 787 ayaa ah xulashada ugu habboon ee marinnada istiraatiijiyadeed ee ugu muhiimsan ee muddada dheer loo tago Afrika, Ameerika, Yurub iyo gobollada Aasiya-Baasifigga. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ee 2020, Qatar Airways waxay qaadatay seddex Airbus A350-1000s, iyadoo dib u xaqiijineysa booskeeda inay tahay shirkadda ugu weyn ee diyaaradaha Airbus A350 oo celcelis ahaan da 'ahaan ay tahay 2.6 sano. Dhammaan seddexdooda waxaa lagu rakibay shirkadda duulimaadyada ee abaalmarinta badan ku guuleysatay ee loo yaqaan 'Class Class', Qsuite.
Tallaabooyin nabadgelyo oo cusub
Maaddaama ay tahay duulimaadkii ugu weynaa ee duulimaad joogto ah ku maraya dhammaan safmarrada, Qatar Airways waxay uruurisay khibrad aan lala tartami karin oo ku saabsan sida si ammaan ah oo loogu kalsoonaan karo u qaado rakaabka xilliyadan aan la hubin.
Qatar Airways waxay si adag u hirgelisay tallaabooyinka ugu horumarsan ee amniga iyo nadaafadda, oo ay ku jiraan bixinta Qalabka Badbaadinta Shakhsiyeed (PPE) ee loogu talagalay shaqaalaha guriga iyo xirmada ilaalinta ee bilaashka ah iyo gaashaanka wejiga la iska tuuri karo ee rakaabka.
Intaa waxaa sii dheer, tallaabooyinka kale ee nadaafadda ee kor loo qaaday, diyaaradda waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee caalami ah oo geeysa Hannaanka 'Honeywell's Ultraviolet (UV) Cabin System, oo ay maamusho Qatar Aviation Services, iyadoo sii kordhisay tallaabooyinkeeda nadaafadda ee markabka.
Hogaaminta soo kabashada safarka adduunka
Bishii Maajo, shabakadda Qatar Airways 'waxay hoos u dhacday illaa 33 meelood oo ka mid ah meelaha ay masiibada safarka iyo safarku ka jirto adduunka oo dhan. Intaa wixii ka dambeeyay, diyaaradda ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu dhistay shabakadeeda iyadoo la jaanqaadeysa baahida safarka adduunka si ay u gaarto 110 goobood dhammaadka sanadka. Kaliya maahan Qatar Airways inay ka shaqeysay dib u dhiska shabakadeeda ka hor cudur safka, waxay kaloo ku dartay toddobo meelood oo cusub: Abuja, Nigeria; Accra, Gaana; Brisbane, Australia; Cebu, Filibiin, Luanda, Angola; San Francisco, USA; iyo Seattle, USA (laga bilaabo 15 Maarso 2021).
Si loo hubiyo in rakaabku ay leeyihiin kalsooni ay ku ballansadaan safarka cimilo yar oo la saadaalin karo, Qatar Airways waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah siyaasadaha ballansashada ugu dabacsan ee suuqa, iyadoo siineysa fursado badan oo ay ka mid yihiin ansax tigidh laba sano ah, isbeddelo taariikhda aan xadidneyn, tikidhada la isweydaarsado foojarka safarka ee mustaqbalka ee qiimaha kordhay, iyo isbeddelada ku-meel-gaadhka ah ee aan xadidnayn. Qatar Airways waxay sidoo kale ka go'an tahay inay ixtiraamto soo celinta rakaabka, iyadoo bixisay $ 1.65 bilyan oo doolar. Diyaaradda ayaa dhowaan shaacisay inay u fidin doonto rakaabka isbeddello taariikhda aan xadidneyn iyo lacag celin lacag la’aan ah dhammaan tikidhada ay soo saartay Qatar Airways illaa 30-ka Abriil 2021 ee safarka oo la dhammaystirayo 31-ka Diseembar 2021
Qatar Airways sidoo kale waxay ku adkeysatay hamigeena ah inaan abuurno xulafo istiraatiiji ah adduunka oo dhan waxayna ogolaatay iskaashiyo cusub oo cusub 2020, oo ay ku jiraan American Airlines, Air Canada, iyo Alaska Airlines.
Maalgashiga joogtada ah ee khibrada macaamiisha
In kasta oo saamaynta dhaqaale ee COVID-19 ay ku yeelatay warshadaha duulista, Qatar Airways waxay sii waday inay maalgashato alaabteeda iyo adeegyadeeda si loo hubiyo in khibradeeda macaamiisha ay weli tahay tan ugu fiican adduunka. Bishii Ogosto, waxaan ku dhawaaqnay cusbooneysiin waaweyn iyo astaamo cusub oo ku saabsan codsigeenna moobiil iyo bishii Sebtember waxaan u dabaaldegnay diyaaraddii 100-aad ee raxanteenna oo lagu rakibay 'Super Wi-Fi', noqoshada shirkad diyaaradeed oo bixisa tirada ugu badan ee diyaaradaha Aasiya oo leh qalab sare - xawaare dheereeya.
Diyaaradda gudaheeda, diyaaraddu waxay sii waday inay soo bandhigto khibradeeda cunno oo dhameystiran, waxyaabaha raaxada leh iyo adeegga abaalmarinta lagu guuleysto, iyadoo la adeegsanayo tallaabooyin nabadgelyo oo kor loo qaaday. In Class Class, adeegga duulimaadka ee Dine-on-Demand ayaa hadda loo soo bandhigay si buuxda loogu daboolay saxaarad iyada oo xulashadeena cabitaanka. Fasalka Dhaqaalaha, Qatar Airways 'qibradeeda cunno buuxda' Quisine 'waa la heli karaa, iyada oo cunno iyo goyn loogu adeego gebi ahaanba la xiray sida caadiga ah saxaarad. Bishii Oktoobar, Qatar Airways waxay soo bandhigtay noocyadeedii ugu horreeyay ee vegan ee cuntooyinka macmacaanka ah ee loogu talagalay macaamiisha qiimaha leh. Waxay sidoo kale sii waday inay layaabto oo ka farxiso macaamiisha liisaska kooban iyo taabashada gaarka ah ee dabaaldegyada muhiimka ah ee Ciidda, Thanksgiving, Maalinta Qaranka Qatar, iyo xilliyada ciidaha.
Qatar Airways waxay kordhisay fikirka cuntada ee Al Mourjan Lounge ee garoonka caalamiga ah ee Hamad (HIA) si loogu daro mid ka sareeya kan la carte, sushi imika la diyaariyey, iskii adeegsi qabow iyo isugeyn buuxda. Waxay sidoo kale sameysay Mariner Lounge - oo ah meel gaar ah oo loogu talagalay badmaaxiinta si ay ugu nastaan ​​raaxada inta ay ku jiraan transit - iyada oo lagu aqoonsanayo doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin in dhaqaalaha adduunka uu socdo.
Muhiimad ahaan, waxaan horumarin weyn ku sameynay Naadiga Xaquuqda ee Qatar Airways, iyadoo qayb ka ah isbeddelka barnaamijkeenna daacadda ah si aan u siino abaalmarino badan oo ka wanaagsan xubnaheeda. Bishii Ogosto, Qatar Airways Privilege Club waxay dib-u-eegis ku sameysay siyaasaddeeda Qmiles - marka xubin kasbato ama qarash gareeyo Qmiles, dheelitirkoodu wuxuu ansax noqon doonaa 36 bilood oo dheeri ah - sidoo kale waxaa laga saaray khidmadaha diiwaangelinta ee duulimaadyada abaalmarinta. Bishii Nofembar, Naadiga loo yaqaan 'Privilege Club' ayaa jaray tirada Qmiles ee loo baahan yahay si loo ballansado duulimaadyada abaalmarinta illaa boqolkiiba 49 iyo sidoo kale waxay bilaabeen Naadiga Ardayda - barnaamij cusub oo bixiya faa'iidooyin kala duwan oo aan la helin oo loogu talagalay ardayda si ay u taageeraan inta ay ku jiraan safarkooda waxbarasho. .
Madaarka Caalamiga ah ee Hamad
Iyada oo laga jawaabayo COVID-19, HIA waxay hirgelisay hanaan nadaafadeed oo adag waxayna ku dabaqday tallaabooyin kala fogaynta bulshada oo dhan. Meelaha laga taabto rakaabka si joogto ah ayaa loo nadiifiyaa oo irdaha laga soo galo iyo tirooyinka albaabka basaska waa la nadiifiyaa duulimaad kasta ka dib. Intaa waxaa dheer, gacmo nadiifiyayaal ayaa lagu bixiyaa goobaha muhiimka ah ee laga taabto garoonka diyaaradaha. Gegada diyaaraduhu waxay heleen oo ay hirgeliyeen teknoolojiyaddii ugu dambaysay ee lagu hagaajinayo nabadgelyada rakaabka iyo shaqaalaha oo ay ku jiraan iyadoo la isticmaalayo aalado jeermiska dilaya, koofiyadaha baaritaanka kuleylka ee horumarsan iyo godadka jeermiga lagu baaro ee jeermiska ee loogu talagalay boorsooyinka la hubiyo
HIA waxay sidoo kale sii waday shaqadeeda mashruucii ballaarinta himilada - waxay ku socotaa inay kordhiso awoodeeda in kabadan 53 milyan oo rakaab ah sanadki 2022 iyadoo kudareysa meel iyo howlo badan garoonka diyaaradaha qaab naqshadeynta rakaabka xiisaha badan.
Qatar Duty Free (QDF) waxay ku faantay inay xusto sanadguuradeedii 20aad, iyadoo cagta la marinayo garoonka diyaaradaha oo ka xasilloon sidii caadiga ahayd xilligii masiibada, waxay dardar gelisay qorshayaal dib loogu habeynayo bakhaarkeeda waajibka ah ee canshuuraha oo ku yaal Koonfurta Node. QDF waxay sidoo kale furtay dukaan fikrad qurux cusub, dukaanno noocyo badan oo dumarka lagu iibiyo iyo laba dukaan oo pop-up ah - Penhaligon iyo Carolina Herrera - iyo sidoo kale inay bilaabaan hudheel Hublot ah iyo kii ugu horreeyay ee tafaariiqda safarka ee Loro Piana ee Bariga Dhexe. Madaarka Caalamiga ah.
In kasta oo Qatar Airways ay diirada saareyso hadafkeeda aasaasiga ah ee ah inay dadka dib ugu celiso guryahooda isla markaana ay u daabusho gargaarka muhiimka ah gobolada ay saameysay, diyaarada ma ilaawin waajibaadka ka saaran deegaanka. Diyaaraddu waxay saldhig ka dhigtay duulimaadyadeedii Airbus A380s maadaama deegaan ahaan aan qiil loo heli karin inay ku shaqeyso diyaarad noocaan oo kale ah oo afar engine leh suuqa hadda jira. Heerka diyaaradeed ee diyaaraduhu isbarbar dhig ku sameeyeen A380 iyo A350 oo marayay magaalooyinka Doha ilaa London, Guangzhou, Frankfurt, Paris, Melbourne, Sydney iyo New York. Duulimaad caadi ah oo hal dhinac ah, diyaaradda waxay heshay dayuuradda A350 inay keydisay ugu yaraan 16 tan oo ah kaarboon laba ogsaydh saacaddiiba marka la barbar dhigo A380. Falanqeyntu waxay ogaatay in A380 ay sii deysay in ka badan 80% in ka badan CO2 saacadiiba halkii A350 ay mari jirtay mid kasta oo ka mid ah jidadkan. Xaaladaha Melbourne iyo New York A380 waxay sii daayeen 95% in kabadan CO2 saacadiiba saacad kasta iyadoo A350 keydineyso kudhowaad 20 tan oo ah CO2 saacadiiba.
Qatar Airways ayaa sidoo kale bilawday barnaamij cusub oo u sahlaya rakaabka inay si iskood ah u dheelitiraan qiiqa kaarboonka la xidhiidha safarkooda ee ay ku goosanayaan tikidhkooda. Shirkadda diyaaradaha oo ay weheliso mid ka midxubnaha isbahaysiga adduunka sidoo kale waxaa ka go'an qiiqa kaarboonka saafiga ah ee saafiga ah sannadka 2050, noqoshada isbahaysigii ugu horreeyay ee duulimaad caalami ah ee ku midoobaya bartilmaameed guud si loo gaaro dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Kafaalaqaadka iyo CSR
Himilada Qatar Airways ee ah inay dadka isu keento iyada oo loo marayo awoodda isboortiga iyo inay taageerto bulshooyinka aan ka shaqeyno waxay sii waday 2020 inkasta oo ay jiraan caqabado. Bishii Nofeembar, Qatar Airways ayaa calaamadeysay labo sano inay ka harsan tahay FIFA World Cup Qatar 2022 ™. Maaddaama ay iskaashi rasmi ah la leeyihiin FIFA iyo shirkadda duulimaadka u duuli doonta malaayiin taageerayaal kubada cagta ah Qatar si ay uga qeyb galaan tartankan, shirkaddu waxay soo bandhigtay diyaarad si gaar ah u calaamadeysan Boeing 777 oo lagu xardhay FIFA World Cup Qatar 2022 ™ livery.
Marka la eego dadaalladayada mas'uuliyadda bulsheed ee shirkadaha, sannadkan waxaan diiradda saarnay gargaarka COVID-19 iyo sidoo kale gargaarka degdegga ah. Bilowgii duulimaadka faafa ee COVID-19 Qatar Airways Cargo waxay u dirtay Shiinaha shan xamuul oo sida ku dhowaad 300 tan oo sahay caafimaad ah oo ay ku deeqday shirkadda si ay u taageerto dadaallada gargaarka coronavirus. Intaa waxaa sii dheer, mahadnaq aan u mahadcelinayo kuwa doorka muhiimka ah ka ciyaaray muddadii cudurku socday, Qatar Airways waxay siisay 100,000 oo tikidhada soo celinta ah ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo 21,000 macallimiinta adduunka oo dhan.
Si loo taageero dadka reer Lubnaan iyo Suudaan kadib musiibooyinkii musiibada ahaa ee ka dhacay dalalkaas, Qatar Airways waxay la shaqeysay Qatar Charity iyo Monoprix Qatar - oo xubin ka ah Ali Bin Ali Holding - si loo gaarsiiyo barnaamij gargaar oo awood u siinaya muwaadiniinta iyo dadka deggan Qatar inay ku deeqaan ku dhowaad 200 tan. raashiin iyo agab kale oo muhiim ah kuna qaado Qatar Airways Cargo.
Xamuulka Qatar Airways
Markuu kor u kacay booska koowaad ee 2019, xamuulka xamuulka wuxuu si xoogan usii waday sanad dhan oo adag, isagoo muujiyay hogaamintiisa iyo xitaa inuu sii kordhayo saamigiisa suuqa inta lagu jiro aafada. Qatar Airways Cargo waxay bilowday 2020 iyadoo xamuul u dirtay Campinas (Brazil), Santiago (Chile), Bogotá (Colombia) iyo Osaka (Japan). Shirkadda ayaa sidoo kale la siiyay 'International Cargo Airline of the Year' munaasabadda abaalmarinta STAT Trade Times, iyadoo lagu aqoonsaday hoggaankeeda iyo hal-abuurnimadeeda.
Qeybta xamuulka ayaa wali ah mid kacsan, hal abuur leh oo adkeysi badan inta lagu jiro aafada, in kabadan seddex jibaarista duulimaadyada xamuulka ee udhaxeeya 60 ilaa 180-200 duulimaad maalin kasta si ay ucaawiso silsiladaha wax soo saarka aduunka. Waxay ku shaqeysay in ka badan 500 oo shaxado xamuul ah gobollada saamaynta ku yeeshay. Iyadoo si dhow ula shaqeyneysa dowladaha iyo NGO-yada, Qatar Airways Cargo sidoo kale waxay qaadday in ka badan 250,000 tan oo ah sahay caafimaad iyo gargaar oo caalami ah labadaba adeegyada la qorsheeyay iyo kuwa charterka ah.
Shirkadda xamuulka qaada ayaa soo bandhigtay mashruucisa waaritaanka ee WeQare waxayna bilawday Cutubka 1aad, iyadoo u fidisay macaamiisheeda hal milyan oo kiilo oo xamuul lacag la'aan ah si loogu qoondeeyo hay'adaha samafalka ee ay doortaan.
Si loo hubiyo sii socoshada ganacsiga adduunka, xamuulka rakaabka iyo kuwa xamuulka qaada waxaa loo bilaabay meelo badan oo adduunka ah. Rakaabka xamuulka qaada ee Boeing 777 waxay bilaabeen safarro cusub sida Melbourne, Perth iyo Harstad-Narvik halka duulimaadyada xamuulka ee caloosha qabsada loo gudbiyay lix meelood.
Adkeeynta QR Pharma wax soo saarkeeda, shirkaduhu wuxuu kudaray konteenaro waara oo waara oo Skycell ah kunteenarada firfircoon ee kaladuwan, iyo, weheliso lammaanaheeda dhulka maamula ee Qatar Aviation Services Cargo, waxaa lasiiyay shahaadada IATA ee CEIV Pharma shahaadada howlaha pharma iyo maaraynta xarunteeda Doha.
Abaalmarinno iyo guulo
Kooxda Qatar Airways Group ayaa sii waday rikoodhkeeda hidaha leh ee ah ku guuleysiga abaalmarino badan oo abaalmarino ah sanadka gudihiisa. Qatar Airways ayaa ku guuleysatay shan abaalmarinood oo cajiib ah Abaalmarintii Ganacsiga ee 2020 waxaana loo magacaabay 'Airline ugu Fiican' sidoo kale waxay ku guuleysatay 'Kuwa ugu Wanaagsan ee Xambaara', 'Fasalka ugu Fiican ee Ganacsiga' iyo 'Bariga Dhexe ee ugu Fiican'. Diyaaradda ayaa sidoo kale ku guuleysatay qeybta 'Cunnada ugu Fiican Cunnada iyo Cabbitaanka'.
Abaalmarinta sanadlaha ah ee Lataliyaha Lataliyaha ayaa bixisay sababo badan oo loogu dabaaldego iyadoo shirkaddu ay soo qaadatay afar abaalmarin oo kale, kuwaas oo kala ah 'Bariga Dhexe ee ugu Fiican Diyaaradda', 'Bariga Dhexe ee ugu Fiican Duulimaadka', 'Bariga Dhexe ee ugu Fiican Ganacsiga', iyo 'Bariga Dhexe ee ugu Fiican Ganacsiga Gobolka Fasalka '.
Abaalmarinta Hab-nololeedka Nasashada ee Socdaalka Caalamiga ah, Qatar Airways waxay heshay abaalmarinta 'Gaaritaanka Gaarka ah ee Hal-abuurnimada Wanaagsan' ee kursigeeda Class Class Business. Shirkadda ayaa sidoo kale heshay Shirkadda Rakaabka Khibrada Rakaabka (APEX) 2021 Five Star Global Official Airline Rating ™.
HIA waxay gaadhay heer sare maadaama ay gashay 'Madaarka Saddexaad ee Ugu Wanaagsan Dunida' bishii Maajo ee Abaalmarinta Madaarka Adduunka ee Skytrax 2020, iyada oo hal meel sare uga kacaysa halkii ay taagnayd sanadkii hore. Waxay haysay cinwaankeedii 'Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe' ee ay sii deysay Skytrax sanadkii lixaad. Waxay sidoo kale noqotay garoonkii ugu horeeyey ee Bariga Dhexe iyo Aasiya ee Skytrax lagu siiyo 5-Xiddig COVID-19 oo ah Badbaadada Madaarka.
Gegada diyaaradaha, oo ay weheliso Qatar Duty Free, waxaa loogu codeeyey 'Madaarka ugu Fiican ee Millennials' iyo 'Deegaanka ugu Wanaagsan ee Tafaariiqda Madaarka' Abaalmarinta Tafaariiqda Safarka ee 2020. Bishii Diseembar, garoonka ayaa noqdey kii ugu horreeyey ee Bariga Dhexe iyo Aasiya ee la siiyo 5 -Star COVID-19 Qiimeynta Badqabka Madaarka ee Skytrax - waxay markhaati u tahay shaqadeeda ku aaddan fulinta degdegga ah ee adag ee tallaabooyinka amniga cusub. HIA waxaa sidoo kale loo codeeyay 'Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe' sanadkii afaraad oo isku xigta abaalmarinta Global Traveler's GT Tested Reader Survey Awards.
Taageerida soo kabashada Qatar ee COVID-19
Kooxda Qatar Airways Group ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaartay taageerida dadaalada guusha leh ee Dowladda Qatar ee lagu xadidayo faafitaanka COVID-19 ee dalka gudihiisa, iyadoo si dhow ula shaqeyneysa maamulada maxalliga ah oo ay ku jirto Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha.
Bishii Juun, Maalmaha Ciidaha Qatar Airways oo kaashanaya shirkadda Discover Qatar waxay bilaabeen xirmooyin hoteello ah oo loogu talagalay dadka soo noqonaya si ay u dhammaystiraan shuruudaha karantiilka, iyagoo hubinaya nabadgelyada iyo raaxada markasta. Si loo taageero warshadaha soo-dhoweynta ee maxalliga ah halka Qatar ay u xiran tahay dalxiisayaasha, Discover Qatar waxay billowday xirmooyin badan oo lagu xirxiro iyadoo lala kaashanayo hudheelada maxalliga ah. Intaa waxaa sii dheer, Bishii Nofeembar Fasaxyada Qatar Airways waxay soo saareen oo ay billaabeen 'Fasaxyo Xilliga Safarka' oo ammaan ah oo loogu talagalay muwaadiniinta Qatar iyo deggeneyaasha inay u safraan Maldives si ay fasax ugu helaan raaxo buuxda iyo badbaado, oo leh tallaabooyin kala duwan oo gaar ah.
Waxay kaloo maal gashatay badeecooyin iyo adeegyo cusub oo diyaar u noqon doona marka waddanku dib ugu furmo booqdayaasha iyo dalxiiska adduunka oo dib u soo kabto. Bishii Diseembar, shirkadda Discover Qatar waxay ku dhawaaqday inay bilaabayaan safarkoodii ugu horreeyay ee dalxiis ee ku teedsan xeebta Qatar, iyagoo siinaya fursad qaas ah oo lagu ilaaliyo isu imaatinka ugu ballaaran ee kalluunka ugu nool adduunka - Kalluunka Whale. Xilli safar gaaban ayaa bilaaban doona bisha Maarso 2021 wuxuuna socon doonaa toddobo toddobaad. Sidoo kale bishii Diseembar, Maalmaha Ciidaha Qatar Airways oo iskaashi cusub oo caalami ah la leh TUI, ayaa bilaabay wajiga koowaad ee soojeedinta cusub ee suuqyada Aasiya iyo Baasifigga, taas oo u saamaxaysa macaamiisha inay ku daraan hudheelada, wareejinta iyo waxqabadyada ay diyaaradda Qatar Airways ka dalbanayso websaydhka shirkadda. ugu horreyn taxane ah adeegyo cusub oo la soo saari doono sannadka 2021-ka.
Duulimaadyo badan oo abaalmarin ku guuleystay, Qatar Airways ayaa loo magacaabay 'Airlineka ugu Fiican Adduunka' Abaalmarinta Abaalmarinta Adduunka ee 2019, oo ay maamusho hay'adda qiimeynta gaadiidka caalamiga ah ee Skytrax. Waxaa sidoo kale loo magacaabay 'Duulimaadka ugu Fiican Bariga Dhexe', 'Fasalka ugu Fiican Ganacsiga Adduunka', iyo 'Kursiga Fasalka ugu Fiican ee Ganacsiga', iyada oo lagu aqoonsanayo waayo-aragnimadeeda heerka fasalka Ganacsiga, Qsuite. Waa diyaaradda kaliya ee la siiyay abaalmarinta 'Skytrax Airline of the Year', oo loo aqoonsan yahay inay tahay meesha ugu sareysa ee shirkadaha diyaaradaha, shan jeer.